नागरिकहरूको सेवा ब्यूरो सेन्ट लुइस: CSB लाई कसरी सम्पर्क गर्ने • DutchtownSTL.org
नागरिक सेवा सेवा ब्यूरो को लागि डचटाउन गाइड
यो नागरिकको सेवा ब्यूरो तपाईंले सामना गर्न सक्ने सबै प्रकारका मुद्दाहरूको डिलि forका लागि सेन्ट लुइसको क्लियरिhouseहाउस शहर हो। यदि तपाईं एक आपतकालीन स्थितिसँग व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ भने, CSB धेरै जसो केसहरुमा कल गर्ने को हो।
तपाईं निम्न कोटिहरूमा मुद्दाको लागि नागरिकहरूको सेवा ब्यूरोसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ:
आगो सुरक्षा मुद्दाहरू
खाद्य स्थापना मुद्दाहरू
निरीक्षण (वाणिज्यिक र आवासीय)
पार्कि Me मीटर
सडक र गल्ली मुद्दाहरू
रद्दी टोकरी, डेब्रिज, र रिसाइक्लि।
झार र उच्च घाँस
यद्यपि यी मुद्दाहरू सहर विभागहरू र एजेन्सीहरूको एक ठूलो समूहले सम्बोधन गरे पनि, CSB सेवा अनुरोध केन्द्रिकृत गर्दछ र मुद्दाहरूको रिपोर्ट गर्ने प्रक्रियालाई सरल बनाउँछ। सडक विभाग, पशु नियन्त्रण, पार्क र मनोरन्जन, र यस्तै अन्यको लागि सम्पर्क जानकारी ट्रयाक गर्नुको सट्टा, CSB तपाईंको शहरका अधिकांश मुद्दाहरूको समाधानको लागि एक स्टप शप हो।
नागरिकहरूको सेवा ब्यूरोलाई कसरी सम्पर्क गर्ने
टेलिफोन द्वारा CSB लाई सम्पर्क गर्नुहोस्
नागरिकको सेवा ब्यूरोमा पुग्न सकिन्छ (314) 622-4800। तपाइँको सेवा अनुरोध सहि दिशामा जानको लागि प्रम्प्ट्सको श्रृंखला अनुसरण गर्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो मुद्दा रिपोर्ट गरे पछि, तपाईं सेवा अनुरोध नम्बरको लागि सोध्न सक्नुहुन्छ। यस नम्बरलाई सन्दर्भ गर्नुहोस् जब तपाईं मुद्दामा पछ्याउन फिर्ता कल गर्नुहुन्छ।
CSB फोन लाइन सामान्यतया सोमबार देखि शुक्रवार, – बिहान –-pm बजेसम्म उपलब्ध हुन्छ।
CSB वेबसाइट मार्फत मुद्दा रिपोर्ट गर्नुहोस्
नागरिकको सेवा ब्यूरोसँग एक छ मुद्दाहरु रिपोर्टिंग को लागी वेबसाइट। तपाईं आफ्नो मुद्दा रिपोर्ट गर्न केहि चरणहरू अनुसरण गर्नुहुनेछ।
चरण एक: समस्या चयन गर्नुहोस्
सम्भावित कोटीहरूको सूचीबाट तपाईंले कस्तो प्रकारको समस्याको सामना गर्दै हुनुहुन्छ फेला पार्नुहोस्।
एकचोटि तपाईंले कोटी चयन गर्नुभयो भने, तपाईंलाई दोस्रो पृष्ठमा लगिनेछ विशिष्ट प्रकारको समस्या छान्नका लागि। तपाइँले आफ्नो मुद्दाको ठ्याक्कै मिल्दो विकल्प देख्न सक्नुहुन्न। सबैभन्दा नजिकको म्याच छनौट गर्नुहोस् - तपाईंलाई पछि तपाईंको विशेष मुद्दा वर्णन गर्ने अवसर दिइनेछ।
चरण दुई: स्थान चयन गर्नुहोस्
अर्को, त्यसपछि तपाइँलाई मुद्दाको निर्दिष्ट स्थान रिपोर्ट गर्न सोधिनेछ। तपाईं एक चौबाटो, पार्सल नम्बर, वा सडक ठेगाना प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
सहि ठेगाना लाई रिपोर्ट गर्न महत्त्वपूर्ण छ। CSB अनुरोधहरू जससँग मान्य शहर ठेगाना छैन सायद अस्वीकृत गरिनेछ। यदि तपाईं आफ्नो घरमा मुद्दा रिपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यो सजिलो छ।
तपाईको छिमेकी भवनहरूका सवालहरूका लागि सही ठेगाना रिपोर्ट गर्न सक्दो प्रयास गर्नुहोस्। कहिलेकाँही यो भ्रमण गर्न सहयोगी हुन सक्छ गुगल नक्सा ठेगाना इंगित गर्न। तपाईं पनि मा ठेगाना प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ शहरको ठेगाना र सम्पत्ती खोज पृष्ठ.
एकचोटि तपाईंले ठेगाना वा चौराहे प्रविष्ट गर्नुभयो, तपाईंलाई प्रमाणित गर्न स्थानको नक्शा देखाईनेछ।
चरण तीन: विस्तृत प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्
तपाईंले CSB लाई रिपोर्ट गर्ने मुद्दाको प्रकारमा निर्भर गर्दै, तपाईंलाई तपाईंको मुद्दाको बारेमा बहु विकल्प प्रश्नहरूको श्रृंखला सोध्न सकिन्छ। तपाईंको क्षमताको उत्तमलाई ती प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् - तपाईंले एक मार्ग वा अर्को विकल्प छनौट गर्नुपर्नेछ।
सबै सेवा अनुरोधहरू सहित, तपाईंलाई तपाईंको आफ्नै शब्दहरूमा विस्तृत विवरण प्रविष्ट गर्न अनुमति दिइनेछ। यो धेरै विशिष्ट प्राप्त गर्न को लागी तपाइँको अवसर हो। नागरिकहरूको सेवा ब्यूरोले तपाईको मुद्दालाई सुल्झाउन अझ सक्षम छ भनेर सुनिश्चित गर्न तपाईले मद्दत गर्न सक्ने सबै विवरणहरू।
निश्चित गर्नुहोस् कि मुद्दा कहाँ छ ठ्याक्कै नोट गर्नुहोस्। उदाहरण को लागी: मुद्दा सम्पत्तीको अगाडि हो कि गल्लीमा? यदि तपाईंले एउटा छेउमा समस्या रिपोर्ट गर्नुभयो भने, निश्चित गर्नुहोस् कि कुन मुद्दा कोर्नकोको कोर्न याद गर्नुहोस् यदि तपाईंको मुद्दामा लागू छ भने। गड्ढा वा अन्य सडक मुद्दाहरूको लागि, कुन लेनमा (उत्तरबाउंड, दक्षिणपश्चिमी इत्यादि) मा रहेको कुरा बुझाउने प्रयास गर्नुहोस्।
चरण चार: समर्थन फाईलहरू संलग्न गर्नुहोस्
अर्को चरण वैकल्पिक हो, तर धेरै सहयोगी हुन सक्छ। यदि तपाईंसँग यस मुद्दाको फोटोहरू छन् भने, तपाईं यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ समीक्षा गर्न CSB को लागि। यदि तपाईं मुद्दामा प्रासंगिक हुनुहुन्छ भने तपाईं पनि पीडीएफ कागजात संलग्न गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंले एक पटकमा फाईलहरू अपलोड गर्नुपर्नेछ। तपाईंले आफ्नो पहिलो फाईल अपलोड गरेपछि, तपाईं अधिक अपलोड गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। बहु नागरिकहरूबाट फोटोग्राफहरू तपाईंको नागरिकहरूको सेवा ब्यूरो केसको समाधान गर्नको लागि धेरै सहयोगी हुन सक्छ।
यदि तपाईंसँग थप्न कुनै फाइलहरू छैन भने, तल क्लिक गर्नुहोस् "समर्थन कागजातहरू छोड्नुहोस्" तल।
चरण पाँच: तपाईको सम्पर्क जानकारी प्रविष्ट गर्नुहोस्
वेबसाइट मार्फत गरिएका नागरिक सेवा ब्यूरो अनुरोधहरूले तपाईंलाई सम्पर्क जानकारी प्रदान गर्न आवश्यक गर्दछ। धेरै जसो केसहरूमा तपाईले सिधा जानकारी प्रदान गर्नुहुनेछ जस्तो तपाईको नाम, ठेगाना, फोन नम्बर, र इ-मेल। सबै जानकारीको आवश्यक छैन, तर राम्रो फोन नम्बर वा ईमेल ठेगानाले मद्दत गर्न सक्दछ यदि सीएसबीले तपाईंलाई मुद्दा स्पष्ट गर्न सम्पर्क गर्नुपर्‍यो भने।
केहि समस्याहरूको लागि, जस्तै पानी र अस्वीकार सेवाको मुद्दाहरूको लागि, तपाईं सट्टामा खाता नम्बर प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
चरण छ: तपाइँको अनुरोध पेश गर्नुहोस्
तपाईले आफ्नो सम्पर्क जानकारी वा खाता नम्बर प्रविष्ट गरेपछि तपाईले आफ्नो अनुरोध पेस गर्न सक्नुहुनेछ। एकचोटि तपाईंले सबमिट क्लिक गर्नुभयो, तपाईंलाई तपाईंको अनुरोधको विवरणहरूको पुष्टि गर्ने पृष्ठ देखाइनेछ। तपाईंले विवरणको साथ ईमेल पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ यदि तपाईंले ईमेल ठेगाना प्रदान गर्नुभयो भने।
पुष्टिकरण पृष्ठमा, तपाईं सेवा अनुरोध नम्बर र जवाफ बाँकी मिति नोट गर्न चाहानुहुन्छ। हामी उनीहरूको बारेमा पछिल्लो खण्डमा कुरा गर्नेछौं।
ट्वीट @stlcsb मुद्दा रिपोर्ट गर्न
यदि तपाईं प्राविधिक तवरमा जानकार हुनुहुन्छ र नागरिकहरूको सेवा ब्यूरोमा मुद्दा रिपोर्ट गर्न द्रुत तरिका खोज्दै हुनुहुन्छ भने समस्याहरू रिपोर्ट गर्ने उत्तम तरिका यस मार्फत हो twitter.
तपाईंको छनौटको ट्विटर अनुप्रयोग खोल्नुहोस् र ठेगाना र समस्याको एक संक्षिप्त विवरण समावेश गरीएको एउटा ट्वीट लेख्नुहोस्। जे होस् तपाई २ 280० वर्णहरूमा सीमित हुनुहुन्छ, संक्षिप्त तर विशिष्ट हुन सक्दो प्रयास गर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग यस मुद्दाको फोटोहरू छन् भने, तपाईं आफ्नो ट्वीटमा चारवटा फोटोहरू संलग्न गर्न सक्नुहुनेछ।
एकचोटि तपाईंले सबै सँगै पाउनु भएपछि, ट्वीट पठाउनुहोस् lstlcsb ट्विटर मा। CSB सेवा अनुरोध नम्बर र जवाफ बाँकी मिति संग जवाफ दिनेछ। खाता निगरानी गरिन्छ र नियमित व्यापार घण्टाको बेला जवाफहरू जारी गरिन्छ।
नागरिकहरूको सेवा ब्यूरोको साथ अनुसरण गर्दै
तपाइँको सेवा अनुरोध को स्थिति जाँच गर्न, तपाइँको सेवा अनुरोध नम्बर लिनुहोस् र मा हेड गर्नुहोस् CSB सेवा अनुरोध स्थिति पृष्ठ। तपाइँले तपाइँको अनुरोध को विवरण र प्रतिक्रिया बाँकी मिति पत्ता लगाउन सक्षम हुनुहुनेछ।
यदि मुद्दा अनुसन्धान गरियो र प्रतिक्रिया सबमिट गरियो भने, तपाईं पनि त्यो जानकारी हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ। पूरा हुने मिति, रिजोलुसन, र विवरण सूचीबद्ध गरिनेछ।
मेरो CSB मुद्दा हल भएन। अब के?
यो सम्भव छ कि जब तपाईं आफ्नो सेवा अनुरोध को स्थिति जाँच गर्न जानुहुन्छ, तपाईं एक प्रतिक्रिया जारी गरिएको छ र अनुरोध बन्द भएको पाउनुहुनेछ। यदि तपाईं अनुरोध गलत रूपमा बन्द गरिएको थियो वा प्रतिक्रिया अपर्याप्त छ भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ भने, नागरिक सेवा सेवा ब्यूरोलाई यस मुद्दामा थप छलफल गर्न सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईं CSB कल गर्न सक्नुहुन्छ (314१622) 4800२XNUMX--XNUMX०० वा ईमेल csb@stlouis-mo.gov अनुगमन गर्न। तपाईं पनि गर्न सक्नुहुन्छ @stlcsb मा ट्वीट तपाईंको सेवा अनुरोध नम्बरको साथ र अपडेटको अनुरोध गर्नुहोस्।
माथिको वर्णन विधिहरु प्रयोग गरी तपाईले नयाँ सेवा अनुरोध पनि पेश गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ तपाइँको विवरण मा यस अंक सम्बन्धित अघिल्लो सेवा अनुरोध नम्बरहरु समावेश गर्न चाहानुहुन्छ।
अझै समस्या छ? तपाइँको NIS लाई सम्पर्क गर्नुहोस्!
यदि तपाईंलाई अझै आफ्नो नागरिक सेवा ब्यूरो सेवा अनुरोध समाधान गर्न समस्या भइरहेको छ भने, तपाईं आफ्नो वार्डको सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ छिमेकी सुधार विशेषज्ञ। यो NIS सबै शहर विभागहरूको लागि तपाइँको सम्पर्क हो। तिनीहरूले तपाईंको मुद्दा सीएसबीको साथ वा तपाईंको अनुरोधलाई सम्हाल्ने विभागको साथ सम्बोधन गर्न सक्दछन्।
अधिक जानकारी र तपाईंको NIS को लागि सम्पर्क विवरणहरूको लागि, हाम्रो भ्रमण गर्नुहोस् डचटाउन छिमेकी सुधार विशेषज्ञ पृष्ठ.
यस पृष्ठ साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पृष्ठ अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो अगस्ट 11th, 2020 .
डचटाउन STL.org डचटाउन छिमेकी संसाधनहरू नागरिक सेवा सेवा ब्यूरो को लागि डचटाउन गाइड